Mahofisi emahofisi Kutengesa uye Kubhadhara muUnited States
Hofisi inowanzo mukamuri kana imwe nharaunda kunoitirwa basa rekutonga, asi inogona zvakare kuratidza chinzvimbo mukati sesangano chine mamwe mabasa akasungirirwa pairi (ona mukuru, hofisi-muridzi, mukuru); iyo yekupedzisira iri kutaura kwekutanga kushandiswa, hofisi senzvimbo pakutanga inoreva kune imwe nzvimbo yebasa. Kana ichishandiswa sedhairekita, izwi rekuti "hofisi" rinogona kureva mabasa ane chekuita nebhizinesi. Mukunyora zviri pamutemo, kambani kana sangano rine mahofisi munzvimbo ipi neipi iyo ine kuvapo kwepamutemo, kunyangwe kana kuvapo kwacho kunosanganisira, semuenzaniso, silo yekuchengetedza panzvimbo pehofisi. Hofisi chiitiko chekugadzira uye chekugadzira; ingave iri hofisi diki yakaita sebhenji pakona yebhizinesi diki rakanyanya kukura (ona hofisi hofisi / Hofisi yepamusha), kuburikidza nemafurati akazara ezvivakwa, kusvika uye kusanganisira zvivakwa zvakakura zvakatsaurirwa zvachose kune imwe kambani. Mukureva kwemazuva ano hofisi inowanzo kureva nzvimbo inoshandira vashandi vevachena. Sekureva kwaJames Stephenson, "Hofisi ndiyo chikamu chebhizinesi bhizinesi rakazvipira kutungamira nekudyidzana kwemabasa alo akasiyana."